သမီးတို့က စကတ်အရှည်ကြီးတွေဝတ်ဝတ်ပြီး ဘယ်သွားကြမလို့လဲ။ အဲ့ဒါကြီးကို အမြဲတမ်းဝတ်စားထားရတာ အဆင်မပြေဘူးလေ။ ရုံးသွား၊ သင်တန်းတက်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ဖို့အတွက် အခြားစကတ်ဒီဇိုင်းအမျိုးအစားလေးတွေကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်သင့်ပြီနော်….
ကဲ (၂၂) ရာစုလည်း ရောက်နေပြီ။ အခုထိလည်း အူကြောင်ကြောင်ပုံစံတွေ ဝတ်စားဆင်ယင်နေကြတုန်းလား။ နှစ်တစ်နှစ်ပြောင်းတာနဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုပြောင်းတာနဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွေက အမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာနော်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် သေချာပေါက်မေ့ပစ်လိုက်သင့်ပြီဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်ပုံစံတွေကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ နားရွက်မှာ (၂၀၁၁) ခုနှစ်ကစလို့ သမာရိုးကျနားကပ်တွေ၊ ဖန်စီဆန်ဆန်နားကပ်လေးတွေ ဝတ်ဆင်ခြင်းက Trend တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာ ဒီလိုနားကပ်တွေက ခေတ်အောက်ကုန်ပါပြီ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့နားရွက်မှာ နားကပ်မဟုတ်ဘဲ အခြားမတူကွဲပြားတဲ့ အရာရာတစ်ခုခုကို မြင်တွေ့သင့်နေပါပြီ။ ပရိသတ်ကြီးရော… နားရွက်ကို အခြားဘယ်လိုဖက်ရှင်မျိုးနဲ့လန်းမယ်လို့ စိတ်ကူးမိလဲ???
၂။ Sneaker များ။
ဒေါက်ဖိနပ်တွေထက်ကို အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားတွေပါ။ မိန်းကလေးဆန်တာထက်စာရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ Sneaker တွေရဲ့ ခေတ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ ပွဲတက်ဖိနပ်တွေ၊ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားတွေနဲ့ ပြန်လည်အစားထိုးသင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ရပ်တန့်သင့်ပြီဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်အမျိုးအစားပါ။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီဂျင်းပြဲတွေကို ဝတ်ဆင်ပြီး လျှောက်သွားနေတာမျိုးက လူကြားထဲမှာ ဘယ်လိုမှမသင့်တော်သလို တော်တော်များများရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာလည်း ဒါကိုဖက်ရှင်တစ်ခုအဖြစ်တောင် မမြင်ကြတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကောင်းကောင်း၊ စတိုင်ကျတဲ့ ဘောင်းဘီ၊ ဂါဝန် အစရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ Impress ဖြစ်အောင် ဖက်ရှင်ကျလိုက်ပါ။
တော်သင့်ပြီလေ၊ တော်တော်လည်းရိုးနေကြပြီမဟုတ်ဘူးလား။ ဘာမှမပါဘဲ ဆွဲဆောင်နေတာထက် စတိုင်ကျကျနဲ့ဆွဲဆောင်ရမယ့် အချိန်ကာလကို ရောက်နေပါပြီ။
သမီးတို့က စကတ်အရှည်ကြီးတွေဝတ်ဝတ်ပြီး ဘယ်သွားကြမလို့လဲ။ အဲ့ဒါကြီးကို အမြဲတမ်းဝတ်စားထားရတာ အဆင်မပြေဘူးလေ။ ရုံးသွား၊ သင်တန်းတက်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ဖို့အတွက် အခြားစကတ်ဒီဇိုင်းအမျိုးအစားလေးတွေကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်သင့်ပြီနော်။
နီယွန်မိတ်ကပ်တွေ ပြင်နေတာ အခုထိရှိတုန်းနော်။ တောဆန်တယ်လို့ မထင်ကြဘူးလား။ အိုင်းလိုင်နာကောင်းကောင်းလေးသုံး၊ ရိုးရှင်းတဲ့မိတ်ကပ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ဆို ဘယ်လောက်တောင် ဖက်ရှင်ကျတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်နေမလဲ မြင်ယောင်ကြည့်ကြပါဦး။
မိန်းကလေးတို့ရေ…။ နောက်လကုန်ပြီဆိုရင်ပဲ (၂၀၂၀) ခုနှစ်လည်း ကုန်တော့မှာနော်။ ပြီးတော့ ကိုဗစ်ကြီးအပြီး အပြင်သွားဖို့အတွက်လည်း အခုတည်းက ဖက်ရှင်အလန်းတွေ ကြိုစဥ်းစားထားရတော့မှာပေါ့။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်ပုံတုံးကြီးတွေကို သေချာပေါက် မေ့ပစ်လိုက်ကြရအောင်နော်။
Source: magforwomen, fashionable